5 Zvishandiso Zvinokurudzira Zvinokurudzira KuBlogger Yese Inotanga
Saka iwe watanga bhurogi rako. Makorokoto! Zvichida iwe unoda kuita zvigaro nazvo,kana zvichida iwe unongoda kugovana zvinyorwa kubva muzororo rako rekare neshamwari uyemhuri. Chero nzira, pane nzira dzakawanda iwe unogona kuita kuti bhaibheri rako riite seanotyisa uye rakanaka.Julia Vashneva, Mutungamiri Wekubudirira Kwekambani we Semalt Dhigirii Dhijitori, inokurudzira mathuluziizvo zvakakosha kune ani zvake anoda kuisa blog.
Kutaura zvakanaka kwakanaka, asi haisi nguva yakarurama. Zvichienderana nepepanhau rako rekubhura(Blogger, Wordpress, nezvimwewo), iwe unogona kunge usina basa rokuperecheka zvachose. Uye kunyangekana iwe uchifunga kuti kunyora kwako uye giramaramu zviri kuenderana nenyika yakadzidziswa, vaverengi vachadarocherechedza zvinhu zvose zvisina kukwana. Muchiitiko ichi, ndinorumbidza Grammarly. Grammarlyiyo ipulazi yakasununguka, yakagadzirirwa kunyora kunoshanda. Iyo inongotarisisa zvosezvekunyora kwako kune zvose zvakajairika uye zvakakanganisika uye zvinopa mazano ekugadzirisa.
Unofanirwa kuva nenzvimbo iyo iwe unogona kuwana mifananidzo yakajeka yekusununguka. Tiri kuraramamune vanhu vanoona, uye kana vanhu vachiverenga paIndaneti, vanotarisira kuona mavara uyegraphics..Kana iwe uchienda kune zvinhu zvokutanga zvaunowana paGoogle, iwe unotya ngozikuaisa zvisiri pamutemo. Nhau dzakanaka ndeikuti kune nzvimbo dzakasununguka ipapo dzinogonarubatsiro! File Morgue uye Wikimedia Commons pane nzvimbo mbiri dzaunogona kuidzivirirastock photos for free kunze kwekuchengeteka mvumo yemufananidzo.
3. Karenda kana Mugadziri
Vanhu vanofarira mabloggi anochengetedzwa nguva dzose. Mishumo yekudzokorora inoreva kurema uye nezvimwekudzidzira kuverenga, izvo zvinoreva kuparidzira uye kubudirira kweblogiti yako. Wakawandanyanzvi dzinokurudzira kuvandudza bhaibheri rako kanenge katatu kana kanomwe pavhiki - asikana iwe usati wagadzirira mapepa ako nguva isati yasvika, iwe uchazadzika pfungwa! Vamwemablogiki anosarudza tsika yemapeni-uye-mapeji emakendendera asi vamwe vanoita zvakanakamahwendefa ari pamakombiyuta. Chero nzira, itai kuti munokwanisa kutora zvosekunyora kwako kwemavhiki mashomanana anotevera kuitira kuti urege kukwira pasi pane zvatiri!
4. Keyword Researcher
Nheyo, SEO, uye ma tags zvinogona kuita sezvinonzi mumbo-jumbo kune vatsva mablogi, asikuidzidza kunogona kukonzera bhulogi yako kusvika kumusoro kwekutsvaga injini.Pfungwa huru yeSeO (search engine optimization) inotora izvomazwi vanhu vachatsvaga kana vari kutsvaga bhurogi rako. Semuyenzaniso,ichi chinyorwa chichange chine mazwi akadai se "mablogi," "blog optimization", nezvimwewo.Ndiyo pfungwa yakanaka kuti mazwi aya adzokorwe muzvinyorwa zvako kuitira kuti utsvakeinjini dzinogona kuzviwana nyore nyore. Kunyange zvazvo vazhinji mabhuku epepanhau vanosanganisira nzirashandisa mazwi ako chaiwo, zvishandiso seGoogle's Keyword Planner zvinogona kuratidza kuti vanganivanhu vanotarisa mazwi enyu ezuva nezuva, kuitira kuti mugone kutsvaga.
Zvakare ne-tech side yezvinhu, analytic tools sezvinonzi Google Analytics zvichaudzaiwe vanhu vangani vakashanyira blog yako nhasi, kana vhiki yapfuura, kana chero. Izvo zvakareinoratidza kuti vaverengi vakawana sei nzvimbo yako uye ndeupi mazwi ekutsvaga anonyanyozivikanwa, iwevanogonawo kudzidza kuti ndezvipi nzvimbo dziri kunyanya kutarisirwa. Kunyange zvazvo analytics arirakanaka chaizvo pamabhutiro ebhuku nhasi, ona kuti unonzwisisa zvose zvinoshandazvechigadzirwa ichi kuti iwe uone nhamba yako yekuverenga uye dzidza chii chinoita kuti bhulogi yako ioneke.
Kubhadhara kunogona kuva basa rako guru rekushanda uye ruzivo, asi runoshanda blog,Zvechokwadi, zvinoda zvakawanda. Kubva pane zvakaitika kune Semalt , right toolsinonyanya kuderedza nguva yako yekuedza-uye-kukanganisa kudzidza kuitira kuti iwe uwedzere nyore kuenda zvakananga kumusoro Source .